आईजीपी खनालको ठाडो आदेश : १५ सय जनाको घर जग्गा कब्जा गर्ने राजपा नेता यादव पक्राउ ! - Kantipath.com
केन्द्रीय सदस्य रामबाबु यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले यादवलाई पक्राउ गरेको हो । यादव नयाँ शक्तिको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका सञ्जय रौनियारसँग मिलेर सर्लाहीका नागरिकको घरजग्गा आफ्नो नाममा लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
यादव र रौनियारबाट १५ सय जना पीडित रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
पीडितको गुनासोपछि प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई दुवैजनालाई पक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको चुनावमा यादव तेस्रो भएका थिए । यादव र रौनियारले ऋण दिँदा रजिस्ट्रेसन नै पास गरेर घरजग्गा नै कब्जामा लिने गरेको भन्ने सर्लाहीका पीडितहरूले गृह मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए।
काठमाडौंमा आएका पीडितहरुले मंगलबार नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’काे निवास खुमलटार पुगेर आफ्नो समस्या सुनाएका थिए।
यसअघि सर्लाहीकै श्याम परदेशीले करिब ५ सय जनालाई मिटर ब्याजमा ऋण दिएर करोडौं रकम ठगी गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
याे पनि पढ्नुहाेस् – यादवमाथि ५ अर्ब ठगीको आरोप, गृहमार्फत छानबिन गरिँदै
झन्डै २ सय गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ऋण दिएर उनीहरूबाट चर्को रकम असुल गरी ५ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा राजपाका केन्द्रीय सदस्य रामबाबु यादवमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ । यादव घरजग्गा कारोबारीसमेत हुन् ।
पीडितहरू गृह मन्त्रालय आउनुअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सँगै लिएर न्याय माग्न सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा पुगेका थिए । त्यसपछि पीडितहरू उजुरीका लागि गृह मन्त्रालय गएका हुन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य पथिकले पीडितहरू अन्यायमा परेको र अर्बौं ठगी भएको गुनासोसहित गृह मन्त्रालयमा आएको बताएका थिए ।
Previous Previous post: Trump’s red tapism in middle east : A global threaten
Next Next post: शहीद स्मारक ‘ए’ लिग : थ्रीस्टारद्वारा ब्रिगेड ब्वाइज पराजित
विप्लव समूहको प्रतिवन्ध हटाउन सकिँदैन : मन्त्री बास्कोटा
प्रचण्ड पग्लिए भने …. !
सांसद कोषको ६ करोड रकम कुन ठाउँमा कति ?
डा केसीको समर्थनमा सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द
केपी ओलीलाई दुवै पदबाट विदा गर्नुपर्छ : नेता वर्षमान पुन